Insixaab tagtiiki Itaaldarro bilowgeed dheh! | KEYDMEDIA ONLINE
Insixaab tagtiiki Itaaldarro bilowgeed dheh!
Axmednuur Cabdulaahi Cali - Akhriste waxaan filayaa inaad ku wareertay magaca aan u xulay faaladeyda, hubaal inaad fahantay macnaha hadiiba aad taqaan Carabiga, hadii aadan aqoon anigaa hadaba kuu sharaxaya.
Insixaab Tagtiiki waa erayo carabi ah macnahooduna uu noqonayo ka bixis xeeladeysan, badanaa waxaa adeegsada askarta.
Siyaasiyiinta Soomaalida waxay badankood ahaayeen tiibo Talyaani ama Ingiriis sidaa awgeed erayada Carabigaa kuma badneyn masraxa siyaasada ilaa jiilka cusub ee carabiga wax ku bartay ay soo ifbaxaan.
Erayadan aan hada sharaxay waxaa markii ugu horeysay xeendaabka siyaasada soo galiyay Ex-Amiirul Islaam Shariif Shiikh Axmed oo dabayaqaadii 2007 tageerayaashiisa ku sagootiyay waxaan go'aansanay inaan Insixaab Tagtiiki ah sameyno, Shariif oo Barrigaa lagu naaneysi jiray Geesiga Islaamka wuxuu intaa ku daray in ay kaartada uun badaleen laakiin dagaalku uu sidii u soconayo waliba uu daba dheeraandoono.
Sheekada layaabka leh waxay aheyd markii Gudoomiye Shariif iyo huwantiisii uu insixaabku gaarsiiyay kismaayo, kudhaa iyo Kenya. Aaway dagaalkuu lahaa waa dabadheeraanaa? Maxaa casmara iyo Jabuuti Geeyay? Jihaadka miyaan madaxda lagu waajibin?
Dad badan oo Cabsanaa Maxaakiimta waxaa waagu ku baryay markii ay dhaayaha saareen tanfiidkii iyo shuurada oo cagaha wax ka dayay xili ay xabashada u loogeen boqolaal dhalinyaro ah oo da'doodu ka yareyd 20sano.
Aaway Ardadii ibnu Quseema iyo Axmed Gureey? Aaway masaakiintii ay tarbuunka tareelayaasha uga qaadeen? Insixaabkii Shariif wuxuu ku dhamaaday Inay Madaxtooyo ku waardiyeeyaan gaaladii uu shalay lahaa halala jihaado.
Maalmuhu isku ekaa, dhacdooyinku soo noqon ogaa, Shariif Shiikh Axmedkii 2007 iyo Cali Maxamuud Raaga isku hadal ekaa. 2011 Waxay dhageygu maqleen Afhayeenka Shabaab Cali dheero oo leh insixaab Tagtiiki ah ayaan Muqdisho uga baxanay.
Muqdisho Waa Magaalada kaliya ee maamulkii ka baxa ama xoog looga saaro uusan dib ugu soo noqon isagoo sidii hore ah. Dib u fiiri Kacaankii Awooda isbaday, waala eryay dibna uma soo noqon,Mareykan iyo daba dhilifkiisa marbay ka carareen Caasimadda dibna cag uma soo dhigin, Qabqablayaashii Muqdishu Sidoo kalaa.
Xeeldheerayaasha aragtida fog wax ku cabira waxay isku waa faqeen in Shabaab aysan insixaabin laakiin laga itaal roonaaday. Shabaabka Caalamiga ah waxaa ku dhacay dhowr dharbaaxo oo waaweyn.
Tan Koowaad waa Musiibo xagga dhaqaalaha uga habsatay. Dowladihii fangareynjiray oo xasarado ka dilaaceen sida Liibiya iyo Yamen. Shiidka dhinkasta ka asiibay wuxuu soo dadajiyay burburkooda. Ma jirto cid dagaal wadi karta maalin galinkeed dhaqaalo la'aan, tusaale Rasaasta waa lacag, Tignikada waxay ku socotaa Shidaal, Dilaaga howsha kuu fulinaayana dabcan mushaarbuu rabaa.
Ka sokow Dhibaatada dhaqaale Shabaab waxaa dhabarka ka wareemay dilkii Osama bin Ladan oo lagu naaneysi jiray Abuu Abdullah oo ahaa qaliifka kaliya oo ay amiirnimada islaamka u ictiraafsanaayeen. Inkastoo dadka siyaasada lafa gura ay ku murmaan inta uu la egyahay xiriirka Qaacida iyo Shabaab ka dhexeeyo hadana midda la islawada ogolyahay waxay tahay in uu jiro wada shaqeyn iyo taageero hiil iyo hooba leh.
Abuu Abdullah markii Abbottabad lagu qaarajiyay ayaan waxaan xiriir la sameeyay qof aad uga warhaya Shabaab oo iga codsaday inaan marna magaciisa shaacin, waxaan weydiiyay hadii sameyn buuran ay ku yeelatay dilkiisa, asaga oo cabsi badani laga dareemayo ayuu igu yiri sidii aabahood loo dilay waa shiiqeena.
Dilka Osama ayaga oo ka anfariirsan ayaa hadana waxaa Muqdisho looga dilay Madaxii Qaacidada geeska afrika Fazul oo ahaa nin ay Mareykanka kala dhexeysay il iyo aragti.
Intaan oo guul daro ah markay dhacday ayaa Ajaanibta joogto Soomaaliya Shabaabkuse ay u yaqanaan Al-ansaar waxaa u cadaatay inaysan hujuumka sii wadi Karin dhowr arimood dartood, Soomaaliya oo aan laheyn meelo lagu dhuunto iyo Soomaalida oo aan ajnabi qarin Karin.
Al-Ansaar waxay ogaadeen in sirdoonkii ugu badnaa ay Soomaaliya soo galeen, Muqaabaraadka oo isugu jiro Soomaali iyo ajaanibba waxay mudooyinkii ugu dambeeyayba ku qulqulayeen gudaha Soomaaliya oo aysan jirin cid kala xisaabtameyso waxay ay sameynayaan, Jaajuusiintaan waxay kalayihiin, C.I.A, oo u shaqeysa Mareykanka Mossad oo yahuuda u basaasta, Mi6 oo ah hey'ada dibada uga soo jaajuusta Ingiriiska iyo kuwa kale.
Ila muhiim ah waxay cadeynayaan in Hey'adaha wax basaasa ay xulufo ku dhaxleeyihiin Al-Shabaab
Shabaab waxay Cagta saareen wadadii guuldarada, meelaha ay ku dambeeyaanaa waa ka sii cararidoonaan, laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay hadii Shabaab jabeen dhibka Soomaaliya Ma soo afjarmaa?
Alla ayaa og kheybka laakiin waxaa cabsi weyn laga qabaa in Somaaliya ay gacanta ku dhigaan Somaali u shaqeysa sirdoono dhiigyo cabyo ah. Lasa arkidoonee.
Wariye Axmednuur Cabdulaahi Cali - London
Muqdisho: Xarunta Muqaabaraadka Aduunka!! - Keydmedia